Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Medicines mostly used (6) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (Q to Z)
Medicines mostly used (6) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (Q to Z)
426. Quinidine သွေးခုန်နှုန်း မမှန်ခြင်းအတွက်၊ 200 mg (sulfate) ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ အရေပြားနီ၊ စိတ်ရူတ်၊
427. Quinine ငှက်ဖျား အပြင်းစားများအား ကုသခြင်း၊ အရေးပေါ်ဖြစ်သည်။
a. ကလိုရိုကွင်းပြီးသော ရှုတ်ထွေးခြင်းမရှိသည့် ငှက်ဖျား = Quinine sulfate 600-650 mg PO x 5-7 days (Children = 8-10 mg/kg PO TDS x 5-7 days) + Doxycycline 100 mg PO BD x7days
b. ကလိုရိုကွင်းပြီးသော ရှုတ်ထွေးသည့် ငှက်ဖျား = အမြန်နုန်းထိန်းသည့် Quinine Glucose IV drip 10 mg/kg load over2hours, then 0.02 mg/kg/min continous till patient can take orally + Doxycycline 100 mg IV BD သွင်းမရမှသာ IM ထိုးရမည်။ ပဌမအကြိမ်ကို 10 mg/kg ပေါင်တဖက်စီ ခွဲ ထိုးပေးနိုင်သည်။ Quinine 300 mg/ml IM ထိုးဆေးသည် နာလွန်းသဖြင့် မိုးရေဖြင့် ရောကာ 60–100 mg/ml အားပြော့စေပြီးမှ ထိုးသင့်သည်။ လူနာခံနိုင်၊ သောက်နိုင်လာသည်နှင့် ပါးစပ်ကတိုက်နည်း သို့ ပြောင်းပါ။ အစာနှင့်တွဲပေးပါ၊
c. ညအခါ ကြွက်သားနာခြင်း အတွက်လည်း ပေးနိုင်။
d. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အရေပြားနီ၊ မူးဝေ၊ မျက်စိအားနည်း၊ သွေးဖိအားကျ၊
428. Rabeprazole Sodium ကို duodenal ulcers အူသိမ်နာ နှင့် (GERD) တို့ကို ရက်တိုကုရန်သုံးသည်။
429. Ramipril (Ramistar 5) = (ACE) inhibitor သွေးတိုးကျဆေး၊ 2.5 mg OD and 2.5-20 mg in 1-2 doses. Cardiac Failure နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊ 1.25mg-2.5mg OD; Maximum 10mg/day သွေးတိုးကျဆေး Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril, Losartan, Valsartan, Irbesartan, Candesartan, Telmisartan, and Eprosartan တွေက သွေးထဲကနေ Potassium ဆားကို ဖယ်ထုတ်တာ နှေးစေတယ်။ Potassium iodide ဆေး မသောက်ရ။
430. Ranitidine and Nizatidine သည် Histamine-2 blockers ဆေးအုပ်စုဝင်ဖြစ်သည်။ အစာအိမ်မှ အက်စစ်ဓါတ် အထွက်နည်းစေသည်။ စိတ်-အလုပ်ရှုပ်၍ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ အစာမြိုပြွန်ရောင် ရင်ဘတ်ပူ၊ အစာခြေရည် အထက်တက်ခြင်း အပြော့စား နှင့် အသင့်အတင့်ဆိုးခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကြောင့် ဖြစ်သည့်လေနာ၊ Adult Dosage = 150 mg, OD/BD/TDS/QID Orally, IM, IV; Paedriatic dosage (20 kg) = 0.75 mg/kg QID IM 150 mg. TDS PO/IM/IV
431. Rennie =2TDS/QID အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေး၊
432. Reserpine 0.05 mg OD and 0.05-0.25 mg QID သွေးတိုးကျဆေး၊
433. Rifampicin, Rifacon, Rifacilin, Rifamycin, Rimactane တီဘီဆေး၊ Ethambutol, Isoniazide, Streptomycin တခုခုနှင့် တွဲပေးရသည်။ လက်ပရိုစီ၊ ဂနိုးရီးယား၊ ဦးနှောက် မြှေးရောင်၊ ဝက်ရူးပြန်၊ ဆီးလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းလွှာရောင်၊ Rifampin 600 mg BD x2days (adults) or 10 mg/kg BD (children) ကိုယ်ဝန်မပေးရ။ အစာမစားမီးပေးပါ။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အရေပြားနီ၊ ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဆီး-အရေပြား-ချွေးနီခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ Take this medicine on an empty stomach, either 1 hour before or2hours after food. For daily use: 150 mg INH + 300 mg Rifampicin; 75 mg INH + 150 mg Rifampicin; For paediatric use: 30 mg INH + 60 mg Rifampicin; For intermittent use (3 times weekly): 150 mg INH + 150 mg Rifampicin; For paediatric use: 60 mg INH + 60 mg Rifampicin; Rifampin 300 mg BD ထပ်ဖြစ်သော အရိုးအတွင်း ပြည်တည်ခြင်း၊ Rifampin, INH, Pyrazinamide + Dexamethasone 0.15 mg/kg QID x 1-2 weeks တီဘီကြောင့် ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊
434. Salbutamol = Albuterol (Ventolin) ပန်းနာနှင့် အသက်ရှူလမ်းပိတ် ရောဂါဆေး၊ ရှူဆေး-သောက်ဆေး၊ 2-4 mg TDS/QID ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ လက်တုံ၊ နှလုံးခုန်မြန်၊
435. Salicylic acid ဝက်ခြံ၊ အရေပြားနာ၊ မှက်ခရုနာ၊ လိမ်းဆေး၊ အနာသက်သာစေသည်။
436. Savlon = Antispetic Liqud, Cream ပိုးသန့်ဆေး၊
437. Scabine, Scabecide, Ascabiol သန်း-ဝဲ ပျောက်ဆေး၊
438. Scopolamine Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ်ရက် အပြင်းအထံ ခေါင်းမူး ရောဂါအတွက် အရေးပေါ် ဆေး 0.5 mg Intra-dermal patch 3-4 timesaday (Behind ear) နားနောက်မှာ ကပ်ခွါဆေး၊
439. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) စိတ်ကျရောဂါ ဆေး၊ = Fluoxetine (Prozac), Paroxetine (Paxil), Sertraline (Zoloft), Citalopram (Celexa), Fluvoxamine (Luvox), Escitalopram (Lexapro) ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး နဲတယ်။ ပျို့၊ ဝမ်းပျက်၊ စိတ်တို၊ အိပ်မပျော်တာ နဲ့ ခေါင်းကိုက်တာ လောက်သာ ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာ လိင်စိတ်နည်း၊ လိင်စိတ်ပြည့်ဝတာ နှေး-မဖြစ်၊ တချို့ လက်တုံတယ်။ ကျားရော မပါ လိင်စိတ် နည်းတတ်တယ်။ ယောက်ျားတွေ သုတ်မလွှတ်နိုင်၊ မိန်းမတွေ မပြီးစီးဖြစ်တယ်။ ဆေးပမာဏ လျှော့ချပေးမယ်။ Viagra ဆေးပေးတာ သက်သာတာ တွေ့ရတယ်။ Bupropion, Mirtazapine, Duloxetine ဆေးတွေက အဲလို မဖြစ်စေဘူး။ တချို့ကို Buspirone ပေးတယ်။
440. Selenium sulfide (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ = deterent-based suspension 2%
441. Selenium sulfide 2.5% lotion or Shampoo လိမ်းဆေး ၇-၁၄ ရက် လိမ်းပါ။ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညှင်း၊
442. Senna = ပွေးကိုင်းဝမ်းနုတ်ဆေး၊ ညမအိပ်မီ လူကြီး ၂ ပြား၊
443. Sensorcaine, Bupivan (Bupivacaine) ခါးထဲထိုးရသည့်ထုံဆေး၊ Epidural 0.25%, 0.5% and 0.75% (non-Obstetrical) ; Most experience to date is with single doses of Sensorcaine up to 225 mg with Epinephrine 1:200,000 and 175 mg without Epinephrine
444. Septrin = (Trimethoprim 160 mg and Sulfamethoxazole 800 mg) = (TMP-SMZ) ၂ နှစ် အောက်ကလေး မပေးသင့်၊
a. (TMP-SMZ) 160/800 mg stat ရက်တို ဆီးအိမ်-ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊
b. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 21 days ရက်တို ကျောက်ကပ်ပြွန်ရောင်ခြင်း၊
c. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 1-3 months နာတာရှည် ကျားဆီးကျိတ် ရောင်ခြင်း၊
d. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 10 days ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ ရက်တို နားကိုက်ခြင်း၊
e. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 7-10 days x 7-10 days ရှီဂဲလား ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊
f. (TMP-SMZ) double strength BD x5days (ဆာလ်မိုနည်းလား) ဝမ်းပျက်ခြင်း၊
g. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD ပိုးကြောင့်ဝမ်းလျှောခြင်း၊
h. Pneumocystis pneumonia နူမိုးနီးယား၊ Cyclospora infection ပိုးဝင်ခြင်း၊ Isospora belli ပိုးဝင်ခြင်း၊ 15–20 mg/kg/d of trimethoprim and 75–100 mg/kg/d of Sulfamethoxazole ထိုးဆေး-စားဆေး၊ တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်ခွဲပြီး ၃ ပါတ်ပေးပါ။ ကာကွယ်ရန် တပါတ် ၃ ခါ ပေးပါ။
i. HIV/AIDS ရှိနေသူများ Isospora belli ပိုးဝင်လျှင် 160 mg trimethoprim + 800 mg Sulfamethoxazole ကို တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက်ပေးပါ။ ထို့နောက် တနေ့ ၂ ကြိမ် ၃ ပါတ်ပေးပါ။
445. Cyclosporiasis ရောဂါအတွက် တနေ့ ၂ ကြိမ် ၇-၁ဝ ရက်ပေးပါ။
446. Sertraline 50-200 mg ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊
447. Sibutramine ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေး၊ ပိန်ဆေး။
448. Silver sulfadiazine (အင်ဖက်ရှင်) အတွက်လိမ်းဆေး၊ cream, 1%, in 500-g container; မီးလောင်နာဆေး၊ (ဗက်တီးရီးယား) နဲ့ (ရိစ်) တွေကို သတ်နိုင်တယ်။ အနာကျက်တာ ကြာလို့ သိပ်မသုံးချင်ကြတော့ဘူး။
449. Singulair ပန်းနာ နှင့် အလာဂျီဆေး၊ လူကြီး 10 mgaday
450. Sodium Nitroprusside 20-400 ug/min IV Infusion နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးကျ ထိုးဆေး၊
451. Sodium thiosulfate (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ 15%;
452. Spasmocip Capsules (Paracetamol 325 mg and Dextropropoxyphene 65 mg) တတောင့် တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်။ ဖျား-နာခြင်း၊ အစာလမ်း-ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း-သည်းခြေလမ်းနာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ် နာခြင်း။
453. Spasmocip, Spasmonil, Spasmo-Proxyvon ဗိုက် တအားနာရင် စားဆေး တနေ့ ၂-၃-၄ ကြိမ်။
454. Spasmonil (Dicyclomine 10-20-40 mg, Paracetamol 500 mg) 3-4 times daily အစာလမ်း-ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း-သည်းခြေလမ်းနာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ ၆ လအောက် မပေးရ။
455. Spasmo-Proxyvon = Dicyclomine (HCl) + Propoxyphene + Acetaminophen အစာလမ်း-ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း-သည်းခြေလမ်းနာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ တနေ့ ၄ ကြိမ်ပေးသည်။ မကောင်းသော သတ္တိများ = ဘိန်း အနည်းငယ်ပါသည်။ ရင်တုံသည်၊ ဆီးတင်းသည်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်သည်၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးသည်။ အိပ်ခြင်သည်။ ဆေးစွဲတတ်သည်။
456. Spectinomycin (HCl), Trobicin သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ (2,000-4,000 mg IM daily single dose) ;2Gm IM BD x 24-48 hours and followed by orally Cefixime 400 mg BD ဂနိုးရီးယားပိုး ကြောင့် အဆစ်နာခြင်း၊ 1 Gm IM stat ဂနိုးရီးယား။
457. Spironolactone, Aldactone (Spironolactone + Frusemide = Lasilactone, Spiromide) ဆီးသွားစေသည့် ဆေး၊ 25-100 mg daily ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ ရာသီမမှန်၊ မူးဝေ၊ ခေါင်းကိုက်၊ စိတ်ရှုတ်၊ ယောက်ျားများရင်သားထွက်။
458. Stemetil (Phenothiazine), Emidoxyn မူး-အန်-ပျို့သက်သောဆေး၊ 12.5 mg IM/Orally QID စိတ်ရောဂါများ၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ (Vertigo) ခေါင်းမူးခြင်း။
459. Streptokinase 250,000 IU IV or 1 mlU/hour IV Infusion နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ သွေးခဲခြင်းကို ကုသရန်ဆေး။
460. Streptomycin = (အမိုင်နိုဂလိုင်ကိုဆိုက်) အုပ်စု၊ ပဋိဇီဝဆေး၊ တီဘီ၊ ပလိပ်၊ (ဂနိုးရီးယား)၊ နှလုံး အတွင်းသား-သားအိမ်အဝ-ဆီးလမ်းအဝရောင်ခြင်း၊ 1 Gm/dose TB; 2,000-4,000 mg IM Daily; 15 mg/kg OD-BD ဆေးတမျိုးထဲမပေးရ၊ ဆေးပြီးသည့်အတွက်သိပ်မသုံးတော့၊ ဆိုးကျိုး = ကျောက်ကပ် ထိခိုက်။
461. Sucralfate အစာအိမ်လေနာဆေး၊ 1 QID
462. Sulfadoxine-pyrimethamine ငှက်ဖျားကုသရန်-ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
463. Sulfonylureas ဆီးချိုစားဆေး၊
a. 1st Generation: Orinase (tolbutamide) = 500 - 3000 mg; Tolinase (tolazamide) = 100 - 1000 mg; Diabinese (chlorpropamide) = 100 - 500 mg
b. 2nd Generation: Glucotrol (glipizide) 2.5 - 40 mg; Glucotrol XL (ext. rel. glipizide) 2.5 - 20 mg; Micronase, Diabeta (glyburide) 1.25 - 2.0 mg; Glynase (micronized gly.)3- 12 mg
c. 3rd Generation: Amaryl (glimepiride) 1 - 8 mg d. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = သကြားဓါတ်နဲခြင်း၊ အစာမကျေခြင်း၊ ပျို့၊ ရင်ပူ၊ သွေးအားနဲ၊ ဝလာ၊
464. Sulphacetamide (10-30% QID) မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း မျက်စဉ်း။
465. Sulphamethoxazole (SMZ) 800 mg BD ဆီးလမ်း-အသက်ရှူလမ်း ဗက်တီးရီးယားနိုင်သည့်ဆေး။
466. Sumatriptan Migraine Emergency treatment (မိုင်ဂရင်း) အရေးပေါ်ဆေ6းmg S/C (နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် သွေးတိုးရှိသူများမှအပ) အရေပြားအောက်-ထိုးဆေး၊
467. Telavancin: Adult 10 mg/kg IV q24h for 7-14 d; infuse over 1 h; CrCl 30-50 mL/min: 7.5 mg/kg/d CrCl 10-29 mL/min: 10 mg/kg q48h အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု-ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
468. Telithromycin (Ketec) 800 mg
469. Tenovate = Clobetasol Propionate နာတာရှည် အရေပြားအနာများအတွက် လိမ်းဆေး။
470. Terbinafine (Lamisil) စားဆေး 250 mg ကို တနေ့ ၁ လုံး၊ ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာကြာသလို သောက်ရမယ်။ ဥပမာ ၆ ပါတ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေက ဝမ်းပျက်၊ ယား၊ အစာမကျေ၊ အနီပြင်ထွက်၊ အစားပျက်။ လက်သည်း-ခြေသည်းမှို၊ Terbinafine 1% solution တနေ့နှစ်ခါ တပါတ်ကြာလိမ်းပါ။ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညှင်း၊
471. Terconazole မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ 0.4% cream OD x7days, 0.8% cream or 80 mg suppository
472. Terfed-D Tablets (Terfenadine USP 60 mg + Pseudoephedrine Hydrochloride BP 120 mg) = 1 tablet BD အလာဂျီအတွက်ဆေး။
473. Tetracyclics = Maprotiline (Ludiomil) Mirtazapine (Remeron) စိတ်ကျရောဂါဆေး၊
474. Tetracycline (HCl), Achromycin ပဋိဇီဝဆေး၊
a. Doxycycline for 7–14 days လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့် (ကလာမိုင်ဒီးယား) အင်ဖက်ရှင်၊ ကျား-မ ဆီးပြွန်-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကျားဆီးကြိတ်-အစေ့ရောင်၊ ဝက်ခြံ၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်၊ (လိုင်းမ်) ရောဂါ၊ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ၊ နူမိုးနီးယား၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ မွေးလမ်း-အနာ၊ အမီးဘား ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဂနိုရီးယား၊ ဝက်ခြံ၊ မျက်စိနာ၊ အစာလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ တိုက်ဖတ်စ်၊ မျက်ခမ်းစပ်၊ ပလိပ်၊ ကာလဝမ်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ (ဖယ်လ်စီပဲရန်) ငှက်ဖျား၊ မီးလောင်နာ၊ ခရီးသွားဝမ်းပျက်ခြင်း၊
b. Tetracycline 250 mg BD or Doxycycline 100 mg daily or Erythromycin 250 mg TDS + Prednisolone 0.125% BD မျက်ခွံရောင်ခြင်း၊ Blepharitis
c. Tetracycline 250-500 mg QID + Sulfonamide 10% Eye drop x 2-3 days ဗက်တီးရီးယားကြောင့် မျက်စိနာခြင်း။
d. Tetracycline 500 mg QID x2weeks ဆစ်ဖလစ် ပဌမဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့်၊
e. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ဝမ်းပျက်၊ မွေးလမ်း-စအိုယား၊ ဆီးနီ၊ အရေပြား-မျက်စိ အရောင်ပြောင်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ အစားပျက်၊ ဝမ်းအရောင် ပြော့၊ ကိုယ်ပူ၊ ဗိုက်နာ၊ ကိုယ်ဝန်မပေးရ။
475. Thiazolidinediones ဆီးချိုစားဆေး၊
476. Tibolone သည် Estrogen ခေါ် အမျိုးသမီး ဟော်မုန်းဓါတ်ဖြစ်သည်။
477. Ticarcillin (71.43 – 95.24 mg/kg TDS Slow IV) (62.5 mg/kg Slow QID IV/IM) ဗက်တီရီးယား အမျိုးမျိုး၊ လေမကြိုက်သော ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊
478. Tincture of iodine 2-7% ဆိုတာ Potassium iodide or Sodium iodide + Ethanol and water ဖျော်ထားတာ အနာတွေမှာ သုံးတယ်။ Emergency survival kits ရှေးဦးသူနာပြုအိတ်တွေမှာ ပါမယ်။ သောက်ရေ ၁ လီတာထဲကို 2% Tincture ၅ စက်ထည့်ရင် ပိုးသန့်စေတယ်။
479. Tinidazole (Fasigyn) (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်) ပိုး၊ (ဂိုင်ယားဒီးယား) ပိုး၊ မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်လူနာကို ပိုးကာကွယ်ရန်၊ မခွဲမီ ၁၂ နာရီကြိုပေးပါ။2Gm; Adult 1.6 Gm IV infusion; မွေးလမ်းကြောင်းရောင်၊ လေမကြိုက်သည့်ပိုး၊ Orally2Gm x2days;2Gm stat followed by 1 Gm OD or 500 mg BD x 5-6 days; အမီးဘား ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ အသဲပြည်တည်ခြင်း။ Tinidazole 800 mg TDS x 3-5 days + Diiodohydroxyquin 650 mg TDS x 21 days (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊2Gm Stat followed by 1 g/day for 5-7 days သွားဖုံးရောင်၊ 1 Gm x 5-6 days ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အရသာပျက်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းမူး၊ ဆီးနီ။
480. Tobamycin သွေးပြန်ကြောပိတ်ပြီးရောင်ခြင်း၊ သဲခြေအိပ်ရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် အဆုပ်ရောင်၊ နှလုံး အတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊ အနာ-အကိုက် ဆေးများကြောင့် ဖြစ်သည့် အစာအိမ်အနာ၊ ကျောက်ကပ်မကောင်း၍ ဆီးနည်းသည့်ရောဂါ၊ နှလုံးအလုပ် မလုပ်တော့ခြင်း၊ (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV)
481. Tolnaftate = မှို Fungus ကို နိုင်တဲ့ဆေး။
482. Tramadol HCl မူးယစ်ပါသည့် အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊ အစာနှင့် ဝေးလဲရသည်။ တနေ့ ၄-၆ ကြိမ်။
483. Trazodone 100-300 mg (max 400 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊ Depression and Mania
484. Triamcinolone (Tricort 40) (စတီရွိုက်) ထိုးဆေး၊ အရေပြားနာ၊ အဆစ်နာ၊ Triamcinolone acetate 0.1% ointment လိမ်းဆေး = Aphthous ulcer ပါးစပ်တွင်ဖြစ်သော (အက်ဖ်သပ်စ်) အနာ၊
485. Triamterene ပိုတက်စီယံလျှော့ခြင်း နည်းစေသည့် ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်-သွေးတိုး-နှလုံး-ကျောက်ကပ် ရောဂါများ။ ရေဖန်ခွက်အပြည့် အစာစားပြီးသောက်ပါ။ တမျိုးထဲပေးရပါက 100 mg BD တခြားဆေးများနှင့် တွဲပေးပါက ၎င်းထက် လျှော့ပေးပါ။ တနေ့လျင် 300 mg ထက်မပိုရ။ Dytide = (Triamterene and Benzthiazide)
486. Tricyclic antidepressants (TCAs) = Tricyclic antidepressants are Amitriptyline (Elavil), Protriptyline (Vivactil), Desipramine (Norpramin), Nortriptyline (Aventyl, Pamelor), Imipramine (Tofranil), Trimipramine (Surmontil), Perphenazine (Triavil) စိတ်ကျရောဂါဆေး၊
487. TMP-SMZ = Septrin (160 mg Trimethoprim + 800 mg Sulfamethoxazole) ဗက်တီးရီးယား များအတွက်ဆေး၊
488. Trypsin (Protease) သရက်ရွက်ရောင်ခြင်း၊ အစာမချက်နိုင်ခြင်း၊
489. Tylenol (Acetaminophen 500 mg) အနာသက်သာဆေး၊ အက်စပရင်ကဲ့သို့အရောင်မကျစေနိုင်၊
490. Ulcimax (Famotidine) = လေနာဆေး၊ 40 mg HS or 20 mg BD x 4-8 weeks Maintenance: 20 mg HS အစာခြေရည်အထက်တက်ခြင်း၊
491. Urea 10–20% lotion or cream ပါလိမ်းရင် ပိုမြန်တယ်။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ခြေထောက်၊
492. Valacylovir 1 Gm BD or Famciclovir 250 mg TDS + 5% Acyclovir ointment ပါးစပ်-လိင်လမ်း တို့၌ ဖြစ်သော ရေယုံ၊ Valacyclovir (0.5 g) (Valtrex) 0.5–1 g တနေ့ ၃ ကြိမ်။
493. Valium (Diazepam) = 2-10 mg BD IV/IM/Oral အတက်ကျဆေး၊ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အရက်ဖြတ်ခြင်း၊ မွေးဖွါးစဉ် နာခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန်၊ မေးခိုင်၊ မခွဲစိတ်မီ စိတ်ငြိမ်စေရန်၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ (ကလိုရိုကွင်း) များသွားခြင်း၊ Orally 2-10 mg BD/TDS/QID; maximum 30 mg daily; ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = စိတ်မကြည်လင်း၊ မူးဝေ။ Cimetidine, Omeprazole တို့နှင့်တွဲမပေးရ။ အရက်ဖြတ်လျင် 10 mg,3or4times during the first 24 hours, reducing to5mg,3or4times daily as needed
494. Vancomycin (HCl) လူကီးမီးယား၊ (မင်နင်ဂျိုက်တစ်)၊ ဦးနှောက်ပြည်တည်နာ၊ အူမကြီးရောင်၊ နှလုံး အတွင်းသားရောင်၊ ဝမ်းတွင်းမြှေးရောင်၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အနီပြင်ထွက်၊ ဖျား၊ သွေးဖိအားကျ၊ ပျို့-အန်၊ 125 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်။ Vancomycin 20–30 mg/kg; Voriconazole (VFend) 200 mg q12h Vancomycin 15 mg/kg BD (500 mg QID IV Infusion) (0.25 mg/kg.min TDS IV Infusion) အခြား ပဋိဇီဝဆေးများပြီးသော ပြင်းသည့်ပိုးဝင်ခြင်း၊ Vancomycin 1 Gm BD အရိုးတွင်း ပြည်တည်ခြင်း၊ Vancomycin 10 mg/kg TDS + Ceftazidime3Gm IV TDS ခွဲစိတ်ပြီး ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ Vancomycin 15 mg/kg BD + Gentamycin2mg/kg TDS သွေးပြန်ကြောရောင်၊ ရက်တို နှလုံးအတွင်းသား ရောင်၊
495. Varogel အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေး၊ 100ml ထဲတွင် Aluminium hydroxide gel 45.96g + Magnesium hydroxide 30% paste 26.68g + Simethicone 30% emulsion 2.66g ပါဝင်သည်။ 10ml ကို တနေ့ ၄ ကြိမ်သောက်ပါ။
496. Venlafaxine (Effexor), Duloxetine (Cymbalta) Desvenlafaxine (Pristiq), Mirtazapine (Remeron) = စိတ်ကျရောဂါဆေး၊
497. Ventolin (Nebules) 2.5 mg = Salbutamol = ပန်းနာရင်ကြပ်နေစဉ် ရှူရသည့်ဆေး။
498. Verapamil နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ = tablet, 40 mg, 80 mg; injection, 2.5 mg /ml in 2-ml ampoule;
499. Vitamin A (Retinol) Adult = 15,000-500,000 daily Orally and Children = 20,000 IU/Kg ကြက်မျက်သင့် ခေါ် အလင်းရောင်နည်းချိန် မျက်စိအားနည်းသည့်ရောဂါအတွက်ပေးသည်၊ ခုခံအားကောင်း စေရန်၊ ဆဲလ်များအသစ်ဖြစ်စေရန်၊
500. Vitamin B 1 (Thiamine) ထုံနာ-ကျင်နာ၊ အာရုံကြောကောင်းစေရန်၊ (ရိစ်)၊ ဥ၊ အသဲ၊ အစေ့အဆံ၊ အသားတို့၌ ပါဝင်သည်။ ထုံနာကျင်နာ၊ အာရုံကြောအလုပ်ကောင်းစေရန်၊ ချို့တဲ့ပါက (ဗယ်ရီဗယ်ရီ) ရောဂါ ရစေသည်။ အားယုတ်စေသည်။ အစားမစားချင်ဖြစ်မည်။
501. Vitamin B 12 (Cobalamin) ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေရန်၊ ဆဲလ်တည်ဆောက်ရန်၊ သွေး-အာရုံကြောများ အလုပ် ကောင်းစေရန်အတွက် ပေးရသည်၊ အသဲ၊ အသား၊ နို့ထွက်အစာ၊ ငါး၊ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားရန်၊ ချို့တဲ့ပါက Pernicious Anaemia သွေးအားနည်းရောဂါ ရစေသည်။
502. Vitamin B2(Riboflavin) အသဲ၊ နို့ထွက်အစာ၊ အသီးအရွက်၊ ဥ၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ (ရိစ်) တို့၌ ပါဝင်သည်။ ချို့တဲ့ပါက ကျီးကန်းပါးစပ်နာဖြစ်စေသည်။
503. Vitamin B6(Pyridoxine) အချို့ဆေးများကြောင့် ၎င်းဓါတ်နည်းရခြင်းအတွက် ပေးရသည်၊ ဥပမာ တီဘီဆေး၊ သွေးအားနည်းရောဂါတမျိုး၊ B-Natal TheraPops နှင့် B-Natal Lozenges တို့သည် ဗီတာမင် ဘီ-၆ ပါသည့် ဆေးများ။
504. Vitamin B9(Folic Acid) 1 mg OD ဖေါလစ်-အက်စစ်ဓါတ်၊ သွေးနီဥ သန်စွမ်းစေရန်၊
505. Vitamin B Complex ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု၊ ပုံမှန်ဇီဝဖြစ်စဉ်များ လုပ်နိုင်စေရန် အားပေးသည်၊ အရက် သောက်သူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသူ၊ မီးလောင်နာကြီးသူ၊ ခွဲစိတ်ထားသူများပေးရန်၊
506. Vitamin C (Ascorbic Acid) အနာကျင်စေရန်အားပေး၊ နာတာရှည်ရောဂါ၊ အရိုး၊ သွား၊ သွားဖုံး၊ အရွတ်၊ သွေးကြောများ ကောင်းစေသည်။ ခုခံအားအတွက်အသုံးကျ။ ချို့တဲ့ပါက (စကာဗီ) ရောဂါရ၊ မီးလောင်နာ၊ 100-500 mg daily စိမ်းသည့်အသီးအရွက်၊ အသီးအနှံများ၌ပါသည်။
507. Vitamin D = အရိုးတည်ဆောက်ရန်အသုံးဝင်၊ အသက် ၁၃ နှစ်အောက်5mcg (200 IU) မှစ၍ အသက်ကြီးသူများအား 10 mcg (400 IU) နှင့် ၇ဝ ကျော်များအား 15 mcg (600 IU) ပေးသင့်၊ နေရောင်မရသူများအား တနေ့လျင် 25 μg (1000 IU) ပေးသင့်သည်။ ငါးကြီးဆီ၊ နို့ထွက်အစာတို့၌ပါသည်။ နေရောင်ကြောင့် ဗီတာမင် အေ မှ ဒီ ဖြစ်လာသည်။ အရိုးတည်ဆောက်ရန်၊ ချို့တဲ့ပါက အရိုးပြော့ရောဂါ ရစေသည်။ Alfacalcidiol (Calciferol) 1.4 ug/kg daily
508. Vitamin E အသီးအရွက်ကရသော ဆီ၊ ဂျုံ၊ ဆန်၊ ပေါင်မုံ့၊ ဥ၊ အစေ့အဆံတို့၌ပါသည်။ သွေးဥ၊ အာရုံကြော၊ ကြွက်သားများ အလုပ်ကောင်းစွာလုပ်စေရန်၊
509. Vitamin K သွေးထွက်ရောဂါအတွက်ပေးသည်၊ မုံလာရွက်၊ မုံလာထုပ်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊
510. Vometil အအန်သက်သာဆေး၊= 5-10-30 mg BD or TDS; Vomistop = အအန်သက်သာဆေး၊
511. Voriconazole (VFend) မှိုအတွက်ဆေး၊ 200 mg twice daily
512. Xylocaine (Lignocaine) ထုံဆေး၊ 0.5-1.0%; Xylocaine 5% (Lidocaine) ointment အထုံ-အယား-အနာ သက်သာစေရန်လိမ်းဆေး၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်းအတွက် သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးပေးနိုင်သည်။ Xylocaine 10% Pump Spray အနာဒဏ်ရာများအား ချက်ချင်းအနာသက်သာစေသည့် ပန်းရသောထုံဆေး။
513. Xylometazoline 0.05-0.1% sprays TDS/QID ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊
514. Zincovit = Vitamin A + E + B 1 + B2+ B6စသည့် ဗီတာမင်များပါသည့်ဆေး၊
Prescription abbreviations ဆေးညွှန်း အတိုကောက်စာလုံးများ
Posted by Dr. Tint Swe at 8:14 PM